ကလေးတှေ သနျထိုးတဲ့အခါ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
အူထဲမှာနတေဲ့ သနျကောငျ အမြိုးအစား အမြားကွီးရှိတဲ့ထဲမှာ တုတျကောငျကို အမြားဆုံး တှရေ့ပါတယျ။ မူကွိုအရှယျ၊ ကြောငျးနအေရှယျကလေးတှမှော တှရေ့တတျပွီး တဈအိမျလုံးကို ကူးစကျနိုငျပါတယျ။
● စအို ယားယံတာ၊ ကုတျလို့ ဖွဈတဲ့ နီရဲ ယောငျယမျးတာ
● အစားစားခငျြစိတျ မရှိတာ စတာတှေ ဖွဈပျေါတတျပါတယျ။
မိနျးကလေးတှမှောတော့ မိနျးမကိုယျတဈဝိုကျ ယားယံတာ၊ နီရဲတာတာကို ဖွဈစတေတျပါတယျ။
တုတျကောငျရှိတယျဆိုရငျ စအိုဝ ယားယံတတျပွီး ညဘကျတှမှော ပိုဆိုးပါတယျ။ ကလေးတှေ ညအိပျနတေဲ့အခြိနျ ဓာတျမီးနဲ့ စအိုဝကို သခြောကွညျ့ရငျ အဖွူရောငျ တုတျကောငျအသေးလေးတှေ လှုပျရှားနတော တှရေ့နိုငျပါတယျ။
ကလေးမှာ တုတျကောငျ ကူးစကျခံရရငျ အရမျးစိုးရိမျစရာ မလိုပါဘူး။ ဆေးတိုကျရုံနဲ့ ပြောကျပါတယျနျော။
တုတျကောငျတှဟော အူရဲ့ အောကျပိုငျးနားလေးမှာနပွေီး ညဘကျကရြငျ စအိုဝဆီထှကျပွီး ဥ ဥကွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ စအိုဝယားယံတာကို ခံစားရတာ ဖွဈပါတယျ။ တုတျကောငျ အမတဈကောငျဟာ ဥပေါငျး ၁၆၀၀၀ လောကျ ဥနိုငျပါတယျတဲ့။
ကလေးက စအိုကို ကုတျလိုကျတဲ့အခါမှာ လကျသညျးကွားထဲ ဥတှပေါသှားပွီး လကျကနတေဈဆငျ့ ပါးစပျထဲကို ပွနျရောကျ ဖွဈတတျပါတယျ။ တိုကျရိုကျမဟုတျလညျး ဖုနျတှေ၊ အစားအသောကျတှေ၊ တခွားအရာတှကေနလေညျး ဝငျရောကျနိုငျပါတယျ။ ဥတှဟော ခန်ဓာကိုယျ ပွငျပမှာ ၂ ပတျတိတိ အသကျရှငျနိုငျပါတယျ။
ပါးစပျထဲကို ဥက ဝငျရောကျသှားပွီး အူသိမျမှာ ပေါကျပါတယျ။ ပွီးရငျ အူမကွီးကို သှားပွီး စအိုကို ပွနျရောကျပါတယျ။ တုတျကောငျဟာ တိရစ်ဆာနျတှကေနေ တဈဆငျ့မကူးစကျပါဘူး။
>> အိမျမှာ ဘယျလိုလုပျပေးနိုငျလဲ?
● ဆရာဝနျ ညှနျကွားခကျြအတိုငျး ကလေးရော၊ မိသားစုတဈစုလုံးပါ သနျခဆြေး တိုကျပါ။
● တဈအိမျသားလုံး တဈခြိနျထဲ သောကျပါ။ ရောဂါလက်ခဏာမပွလညျး သောကျဖို့ လိုပါမယျ။
● ဖွဈနိုငျရငျ ဆေးတိုကျတဲ့ ညမှာလညျး ရခြေိုးပေးပွီး နောကျနမေ့နကျမှာလညျး ရခြေိုးပေးပါ။
>> တခွားလူတှကေို မကူးစကျအောငျ ဒါတှလေုပျပါ
● ကလေးကို မကုတျခိုငျးပါနဲ့။ အရမျးယားလို့ ကုတျခငျြရငျ အသားနဲ့ တိုကျရိုကျမထိတှစေ့ဘေဲ အဝတျပျေါကနေ ကုတျခိုငျးပါ။
● ကလေးရဲ့ လကျသညျးတှကေို သနျ့သနျ့ရှငျးရှငျး ထားပါ။ အမွဲ ညှပျပေးပါ။ လကျသညျး ကိုကျတာ၊ လကျမ စုပျတာတှေ မလုပျစဖေို့ သတိထားပါ။
● အိမျသာတကျပွီးတိုငျး လကျနဲ့ လကျသညျးအောကျကို သခြောဆေးကွောပါ။
● ကလေးရဲ့ အိပျရာခငျး၊ တဘကျ၊ အရုပျတှကေို ရနှေေးနဲ့ လြှျောပါ။
● ကွမျးပွငျကို သခြောသနျ့ရှငျးပါ။
● အိမျကိုလညျး သနျ့ရှငျးရေး သခြောလုပျပါ။ ကလေး ထိတှနေို့ငျတဲ့နရောတှေ ဥပမာ - တံခါးလကျကိုငျတှကေို ဂရုစိုကျ သနျ့ရှငျးပါ။
● အောကျပွုတျကသြှားတဲ့ အစားအစာကို စားတာမြိုး ရှောငျခိုငျးပါ။
>> ဘယျအခြိနျမှာ ဆေးရုံ၊ ဆေးခနျး မဖွဈမနသှေားရမလဲ?
● ဆေးတိုကျပွီးတာတောငျ မသကျသာရငျ
● သနျကောငျကွီးကွီး ဝမျးထဲမှာပါလာရငျ
● ဗိုကျအောငျ့၊ ပြို့အနျ၊ အားမရှိတာမြိုးဖွဈရငျ ဆရာဝနျနဲ့ ပွသဖို့ လိုပါမယျ။
အူထဲမှာနေတဲ့ သန်ကောင် အမျိုးအစား အများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာ တုတ်ကောင်ကို အများဆုံး တွေ့ရပါတယ်။ မူကြိုအရွယ်၊ ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးတွေမှာ တွေ့ရတတ်ပြီး တစ်အိမ်လုံးကို ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
● စအို ယားယံတာ၊ ကုတ်လို့ ဖြစ်တဲ့ နီရဲ ယောင်ယမ်းတာ
● အစားစားချင်စိတ် မရှိတာ စတာတွေ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။
မိန်းကလေးတွေမှာတော့ မိန်းမကိုယ်တစ်ဝိုက် ယားယံတာ၊ နီရဲတာတာကို ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။
တုတ်ကောင်ရှိတယ်ဆိုရင် စအိုဝ ယားယံတတ်ပြီး ညဘက်တွေမှာ ပိုဆိုးပါတယ်။ ကလေးတွေ ညအိပ်နေတဲ့အချိန် ဓာတ်မီးနဲ့ စအိုဝကို သေချာကြည့်ရင် အဖြူရောင် တုတ်ကောင်အသေးလေးတွေ လှုပ်ရှားနေတာ တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။
ကလေးမှာ တုတ်ကောင် ကူးစက်ခံရရင် အရမ်းစိုးရိမ်စရာ မလိုပါဘူး။ ဆေးတိုက်ရုံနဲ့ ပျောက်ပါတယ်နော်။
တုတ်ကောင်တွေဟာ အူရဲ့ အောက်ပိုင်းနားလေးမှာနေပြီး ညဘက်ကျရင် စအိုဝဆီထွက်ပြီး ဥ ဥကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ စအိုဝယားယံတာကို ခံစားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တုတ်ကောင် အမတစ်ကောင်ဟာ ဥပေါင်း ၁၆၀၀၀ လောက် ဥနိုင်ပါတယ်တဲ့။
ကလေးက စအိုကို ကုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ လက်သည်းကြားထဲ ဥတွေပါသွားပြီး လက်ကနေတစ်ဆင့် ပါးစပ်ထဲကို ပြန်ရောက် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တိုက်ရိုက်မဟုတ်လည်း ဖုန်တွေ၊ အစားအသောက်တွေ၊ တခြားအရာတွေကနေလည်း ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဥတွေဟာ ခန္ဓာကိုယ် ပြင်ပမှာ ၂ ပတ်တိတိ အသက်ရှင်နိုင်ပါတယ်။
ပါးစပ်ထဲကို ဥက ဝင်ရောက်သွားပြီး အူသိမ်မှာ ပေါက်ပါတယ်။ ပြီးရင် အူမကြီးကို သွားပြီး စအိုကို ပြန်ရောက်ပါတယ်။ တုတ်ကောင်ဟာ တိရစ္ဆာန်တွေကနေ တစ်ဆင့်မကူးစက်ပါဘူး။
>> အိမ်မှာ ဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်လဲ?
● ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ကလေးရော၊ မိသားစုတစ်စုလုံးပါ သန်ချဆေး တိုက်ပါ။
● တစ်အိမ်သားလုံး တစ်ချိန်ထဲ သောက်ပါ။ ရောဂါလက္ခဏာမပြလည်း သောက်ဖို့ လိုပါမယ်။
● ဖြစ်နိုင်ရင် ဆေးတိုက်တဲ့ ညမှာလည်း ရေချိုးပေးပြီး နောက်နေ့မနက်မှာလည်း ရေချိုးပေးပါ။
>> တခြားလူတွေကို မကူးစက်အောင် ဒါတွေလုပ်ပါ
● ကလေးကို မကုတ်ခိုင်းပါနဲ့။ အရမ်းယားလို့ ကုတ်ချင်ရင် အသားနဲ့ တိုက်ရိုက်မထိတွေ့စေဘဲ အဝတ်ပေါ်ကနေ ကုတ်ခိုင်းပါ။
● ကလေးရဲ့ လက်သည်းတွေကို သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ထားပါ။ အမြဲ ညှပ်ပေးပါ။ လက်သည်း ကိုက်တာ၊ လက်မ စုပ်တာတွေ မလုပ်စေဖို့ သတိထားပါ။
● အိမ်သာတက်ပြီးတိုင်း လက်နဲ့ လက်သည်းအောက်ကို သေချာဆေးကြောပါ။
● ကလေးရဲ့ အိပ်ရာခင်း၊ တဘက်၊ အရုပ်တွေကို ရေနွေးနဲ့ လျှော်ပါ။
● ကြမ်းပြင်ကို သေချာသန့်ရှင်းပါ။
● အိမ်ကိုလည်း သန့်ရှင်းရေး သေချာလုပ်ပါ။ ကလေး ထိတွေ့နိုင်တဲ့နေရာတွေ ဥပမာ - တံခါးလက်ကိုင်တွေကို ဂရုစိုက် သန့်ရှင်းပါ။
● အောက်ပြုတ်ကျသွားတဲ့ အစားအစာကို စားတာမျိုး ရှောင်ခိုင်းပါ။
>> ဘယ်အချိန်မှာ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း မဖြစ်မနေသွားရမလဲ?
● ဆေးတိုက်ပြီးတာတောင် မသက်သာရင်
● သန်ကောင်ကြီးကြီး ဝမ်းထဲမှာပါလာရင်
● ဗိုက်အောင့်၊ ပျို့အန်၊ အားမရှိတာမျိုးဖြစ်ရင် ဆရာဝန်နဲ့ ပြသဖို့ လိုပါမယ်။